Dadka dalka ku cusub iyo qorshahooda shaqo helid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada shaqo doonka dalka ku cusub ee xafiiska shaqada ka diiwan-gashan oo kor u kacday. sawir: Jessica Gow/TT
"Sweden xataa nadaafadda aqoon iyo xirfad baa lagu weydiin"
La daabacay torsdag 17 augusti 2017 kl 12.45
Qiyaastii 77 000 oo qof ayaa hadda ku qoran waxa loogu waco meeleynta soogalootiga dalka ku cusub etableringsprogrammet, taas markii loo barbardhigo sannadkii hore ka badan 7 000 o qof.
Balse qaar badan soogalootiga dalka ku cusub waxaa suuqa shaqada ka niyad jabiya sharuudaha waxbarasho ee lagu xiro, sida uu aaminsan yahay Farax Ahmed Nuur oo waddanka ku sugan muddo labo sanno ah.
- Dad badan oo waxaa jira markii la yiraahdo "ma haysataa waxbarasho, uu yiraahdo maya, la leeyahay wabxo kuuma hayno, qof waxbarasho leh baa u baahanay". Qofka waa uu niyad jabayaa, kaalmada cayrta ayuu dalbanayaa. Waxaa laga yabaa lacagta yar ee caytra in uu waqti badan ku dhumiyo, ayuu yeri.
Labo sanno ka hor Faraax waxa uu ku noolaa waddanka Koonfur Africa, halkas oo uu ka shaqaysan jiray sida uu Yeri. Asaga oo isku barbardhigaya Koonfur Afrika iyo Sweden dhanka helida shaqada waxa uu yeri in Koonfur Afrika ka sahlan tahay helidda shaqooyinka aan u baahnayn khibradda iyo Aqoonta halka Sweden lagu xirayo khibrad iyo aqoon xataa shaqooyinka nadaafadda.
- Inta markaad imaatid waxaa lagaga baahan yahay aqoon in aad u haysatid shaqaada, ayuu yeri.
Imminka ayuu dalkan Sweden ku jiraa xaalad la yiraahdo högkunjunktur oo ka micno ah in waddanka ka jirto xaalad dhaqaale oo wanaagsan iyo baahi dhanka shaqaalha ah. Tirada Iswoodhisha dhaladka ah ee shaqo la'aanta ku sugan ayaa ka yar boqolkii 3,9 halka tirada soogalootiga ah ee ku sugan shaqo la'aanta ay tahay boqolkii 21,8 taas oo guud ahaan dadka shaqo la'aanta ku sugan ka dhigaysa boqolkii 7,3.
Qorshaha shaqadoonka dalka ku cusub
Qof dhigtay qorshe uu mustaqbalka shaqo ku helo waa Burhaan Saciid Cilmi oo asagana dalka ku sugan labo sanno.
- In aan leysinka qaato, bas iyo taxi wado iyo waxii farsamo ah oo aan ka baxi karo. Leysinka hada waan wadaa ayuu yeri.
Faraax Axmed Nuur asaga waxa uu qorsheynayaa af Iswiidhishka in uu iska tiiriyo kadibna xirfad uu ku shaqaysan karo sameysto.
- Inkasta oo uusan qofka shaqo ka maarmaynin oo nolashiis oo dhan shaqo ku xiran tahay hadana markii aan waddanka imaaday oo fiiriyey qaabka uu u baahan yahay, waxay ila noqotay in aan marka hore luuqada barto kadibna aan xirfad qaado, hadii aan wax sii baran karana aan sii barto. Hadda Mashaallah labo sanno baan joogaa SFI waan dhamaystay, ayuu yeri.
Burhaan iyo Faarax labaduba hadda waxay shaqo ku-meel-gaar ah ka heleen Stockholm Stad oo lagu shaqaaleeyey nidaamka meeleynta soogalootiga dalka ku cusub. Waa shaqo nadaafad oo ay banaanada iyo barxadaha magaalada ka aruuriyaan shaqinka. Labadooduba waxa ay aaminsan yahiin shaqadaan ay hadda hayaan in ay dhaanto lacag kaalmo oo ay cardha ka sugaan, sidoo kalena laga yaabo in ay mustaqbalka u furto suuqa shaqada ee caadiga ah.
Faraax ayaa dadka soogalootiga ah ee shaqo la'aanta ku sugan kula taliyey in aysan ka niyad jabin suuqa shaqada derbi kasta oo ka horyimaada.
- Haddii shaqo nadaafad inta raadisid lagu yiraahdo "aqoon ma u haysataa oo aad tiraahdid maya", in aad niyad jabto ma ahan oo aad caydha iska fadhidid, ayuu yeri.